Mitohy ny hetsiky ny mpianatra eny Ankatso
mercredi, 02 septembre 2015 17:53
Na dia teo aza ny fisamborana narahana abibiana avy amin'ireo lazaina fa mpitandro ny filaminana dia tsy nahasakana ireo mpianatry ny anjerimanontolo eny Ankatso tsy hanoy ny hetsika fitakiana ny hiverenan'ny fampianarana, raha efa nitsahatra izany nandritry ny roa volana noho ny hetsika tsy hampianaran'ireo mpampianatra mpikaroka noho ny fitakian'izy ireo tsy misy valian'ny fitondrana.
mardi, 01 septembre 2015 17:57
Toliara : Miaka-bidy avokoa ny vidin’ny PPN
Nahitana fiakarany avokoa ny vidin’ny entana ilain'ny mponina amin’ny fiainana andavanandro ao Toliara toy ny menaka, savony, legioma, voamaina, sns. Lasa 67.000 Ariary ny vary fotsy iray gony 50 kg, raha 60.000 Ariary izany herinandro lasa. Valo arivo ariary ny kilaon’ny henan’omby, raha 6.000 Ariary teo aloha. Ny hofan-trano mila hifanakaiky amin’ny eto an-drenivohitra.
Voly rongony Toliara
mardi, 01 septembre 2015 14:35
Toliara II : Voly rongony 1 ha mahery nodoran’ny polisy
Voly rongony amin’ny tany midadasika mirefy iray hektara mahery no saron’ny polisy miady amin’ny zava-mahadomelina ao Toliara, ny faran’ny herinandro teo, tany amin’ny fokontany Bevoay Kaominina Ambohimahavelona Toliara II, 50 km atsimon’i Toliara renivohitra. Nambolena niaraka tamin’ny katsaka ireto rongony tratra ireto. Olona telo no voasambotra. Nongontana ary nodorana avy hatrany tany an-toerana ireo voly rongony.
mardi, 01 septembre 2015 12:16
Toamasina : Mpamongady fripy voaroba 6 tapitrisa Ariary
Lasibatry ny jiolahy mitam-basy ny karana indiana mpamongady fripy iray ao Anjoma – Toamasina, ny alatsinainy tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro. Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny vola 6 tapitrisa Ariary. Nitsoaka tamin’ny moto ireo jiolahy taorian’izay. Tsy mbola nisy voasambotra hatreto.
lundi, 31 août 2015 12:34
Toamasina : Nisy fiakarana 200Ar ny vidim-bary
Nahitana fiakarany 100 hatramin’ny 200 Ariary ny vidim-bary ao Toamasina. Lasa 1400Ar ny Makalioka raha teo anelanelan’ny 1200-1300 Ar tamin’ny herinandro. Niakatra ho 1400Ar ihany koa ny vary «stock tampon» fividy 1100-1200Ar teo aloha.
dimanche, 30 août 2015 21:12
Zava-mahadomelina : Roboka hatramin’ny zazavavy tsy ampy taona
Tao anatin’ny 10 andro izao dia olona 10, ka vehivavy ny 04 ary tsy ampy taona ny 03 tamin’ireo, no saron’ny polisy misahana ny zava-mahadomelina ao Toamasina tamina afera sy fidorohana rongony. Ankoatra ireo dia nisy toaka gasy 100 litatra ihany koa sarona tao Mangaraono II raha iny nitadivana mpividy iny.
Fiara nivembena nifatratra teo Anjanahary
dimanche, 30 août 2015 19:37
Mpamily nisotro jus spécial
Avy nanatitra mpandeha nanofa azy spécial ity fiara fitaterana no efa nivilivy sy nivembena ity mpamily. Mbola nisy mpandeha anefa tao anatiny, ka raha hiazo ny fidinana teo Anjanahary dia nifatratra tery amin'ny rindrim-bato ny fiara.Navoaka ny naratra maromaro ary nentina namonjy toeram-pitsaboana.Mila jerena akaiky ireo mpamily misotro jus spécial rehefa hofaina ho fiara spécial izy ireny satria dia mety mahafaty olona ny toy izao.
Miaramila valo lavo tany Ankazoabo
dimanche, 30 août 2015 11:31
Miaramila lavon'ireo dahalo tany Ankazoabo
Tonga ao Ampahibe Antananarivo vao maraina ny vatamangatsiakan'ireo miaramila lavo tany Ankazoabo. Nandray andraikitra tamin'ny fampodiana ny razana ary niatrika izany ny praiminisitra sy ny minisitry ny Foloalindahy notronin'ireo fianakaviana sy rahalahy miaramila marobe.
vendredi, 28 août 2015 11:26
Sekoly miaramila : 50 lahy hanatevina ny ENSOA
Zatovo miaramila niisa 150 no natao ambany faneva tao amin'ny ACMIL Antsirabe io maraina io ka ny 50 dia hiasa ao amin'ny ENSOA.
jeudi, 27 août 2015 21:31
Toliara : Mpamongady saribao voaroba
1,4 tapitrisa Ariary no lasan'ireo jiolahy tamin'ity mpamongady iray. Vola nentina hividianana saribao any avaratry Toliara.
Page 512 sur 516